Wuhan Coronavirus virus – Healthy Life Journal
All posts tagged "Wuhan Coronavirus virus"
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက Covid -19 ကာကွယ်ရေးပညာပေး W ၃ လုံး လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြုလုပ်မည်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားနေသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သူများကို Covid -19 ကာကွယ်ရေးပညာပေး W ၃ လုံး လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ် ခြောက်ပတ်ကြာကာလကြာမြင့်မည့်...
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသူတို့တွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့် Covid-19 မျိုးဗီဇက ကူးစက်မြန်အမျိုးအစားမဟုတ်ကြောင်း သိရ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသူ ၆ ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့် Covid-19 မျိုးဗီဇက ကူးစက်မြန်အမျိုးအစား မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်က ပြောသည်။ “ဂျော်ဒန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid-19...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. ယူကေက ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ပြီး မျိုးပွားတဲ့အခါ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို သန်းနဲ့ချီပြီး ပွားတယ်။ အဲဒီလိုပွားတဲ့အခါ ဆင်တူမျိုးကွဲလေးတွေ အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါက...
Home Quarantine ထားချိန်မှာ ကိုဗစ်သံသယလူနာတွေနဲ့ တစ်အိမ်ထဲမှာ ဘယ်လိုယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြမလဲ . . .
———၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— ကိုဗစ်သံသယလူနာတွေကို Home Quarantine ထားရှိမယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သံသယရှိသူက နေအိမ်အတွင်း (ဒါမှမဟုတ်) ခြံဝန်းအတွင်းသာ နေရပါမယ်။ အပြင်သို့...
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်၍ ရုတ်တရက်အနံ့ပျောက်ခြင်းက အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်၍ ရုတ်တရက်အနံ့ပျောက်ခြင်းက အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ ဆေးပညာဌာန၊ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်လင်းအောင်က အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ကိုဗစ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး-အဖြေအစီအစဉ်တွင်...
“ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးရှိတယ်လို့ သိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိုးရိမ်တာနဲ့စာရင် ကျွန်တော်ကုပေးနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ပိုပြီးစိတ်ပူတယ်”ဆိုတဲ့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာကျော်လှိုင်ထွေး
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အန္တရာယ်အများဆုံးမှာ ရောဂါပိုးတွန်းလှန်ရေးကို ရှေ ့တန်းမှ ရင်ဆိုင်ရသော ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပင်။ နေ့နေ့ညည ရောဂါပိုးနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ပြီး ရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နေရသဖြင့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုအပါအဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချို...
Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရင် စိုးရိမ်ရသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– မေး-Covid -19 ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ ဘာလက္ခဏာတွေ့ရင် စိုးရိမ်ရလဲ။ ဖြေ- Covid-19 ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်ပြီး ၂ ရက်က ၁၄ ရက်အတွင်း လက္ခဏာပြတတ်ပြီး...
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတို့အား ဆေးရုံဆင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်သဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းတွင် ဆေးရုံဆင်းလူနာဦးရေ (၂၆၉၂) ဦးရှိလာ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ည (ဂ) နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တစ်ရက်တည်းတွင် ဆေးရုံဆင်းလူနာဦးရေ (၂၆၉၂) ဦးရှိလာခဲ့ပြီး ဆေးရုံဆင်းလူဦးရေ များပြားရသည်မှာ ဆေးရုံဆင်းသတ်မှတ်ချက် ပြောင်းလဲလိုက်သဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ပါမောက္ခချုပ်၊...
ရန်ကုန်မြို ့နေ ပြည်သူလူထုများ ကိုဗစ်လက္ခဏာခံစားရပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းအတွင်း Testing center တစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ ရန်ကုန်မြို ့နေ ပြည်သူလူထုများ ဖျားနာခြင်း၊ အနံ့ပျောက်ခြင်း စသော COVID 19 ရောဂါလက္ခဏာ တစုံတရာခံစားရပါက လာရောက်ပြသ၍ COVID-19 Rapid Diagnostic Test (RDT) ဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ရန်အတွက်...
ဆားငံရည်နဲ အာလုပ်ကျင်းတာ Corona virus ကိုသေစေနိုင်သလား။
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်ရှူသွင်းရာမှ နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းတွင် ပထမတွယ်ကပ်ပြီး ကလပ်စည်းများအတွင်း ဝင်ရောက်ကာ ပွားများကြပါတယ်။ ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ လေ ၊ တံတွေး ၊ချွဲများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်များစွာ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထိုကလပ်စည်းအတွင်း...